I-Tat Tattoo - I-24 Best Tattoos I-Lip Design I-Ideal For Men and Women - Tattoos Art Ideas
i-sonitattoo August 26, 2016
Uke wabona umdwebo we-lip ngaphambili? Kulungile, uma ungabonanga, mhlawumbe, sekuyisikhathi sokuba ubone eziningi zalezi zithombe ezimnandi zomlomo. Le tattoo kuphela izinhliziyo ezinesibindi abazama ukutshela indaba ngendlela yokuthi akekho owake wakusho ngezithombe.
Ukubekwa kwe-tattoo yakho ye-#lip yilokho okuthonya ubuhle futhi kubiza kakhulu. Indawo oya kuyo ukuyinikla ukuklama kwakho kubaluleke kakhulu. Kunezindawo lapho kungase kube nzima khona lapho umdwebo wakho womlomo ungaba nzima ukudweba.
Izindebe ezithakazelisayo zezindebe
Ingxenye ebucayi yomzimba ibuye ibekwe lapho izithombe zomlomo zingabiza futhi zithatha isikhathi esiningi.
Izindebe zomlomo ezidumile
Umdwebo we-Smile lip
I-lip #tattoo design ingaba elula noma eyinkimbinkimbi kuye ngokuthi yini oyifunayo. Ungakwazi ukwenza ngokwezifiso i-lip yakho tattoo ukuze ubukeke njengehle njengoba lokhu.
Akumelwe ukhohlwe ukuthi indawo yendawo ebaluleke kakhulu. Izindleko ze-tattoo yakho yomlomo zingathonywa kakhulu indawo.
I-tattoo izindebe zegrey
Amapulangwe asezindaweni ezicebile namadolobha azoba abizayo kakhulu uma kuqhathaniswa nalawo akwezinye izingxenye. Abaculi bayazi ukuthi labo abahlala ezindaweni ezivulekile bavame ukukhokha ngaphezulu futhi bakhokha ngaphezulu.
Izindebe zezingubo ze-Smile
Uma usulungele ukuthola le tattoo yomlomo, qiniseka ukuthi wenze kahle ucwaningo lwakho. Abantu abaningi basemgwaqeni ongena emgwaqweni ngoba behluleka ukuthola iphutha labo labomdanso bephupho ngenxa yephutha lomculi abaqashile.
I-Word lip tattoo
Abantu manje basebenzisa ochwepheshe ukuze bathole lelo tattoo lomlomo abayifunayo.
Skull izindebe tattoo
Awekho amanga ekutsho ukuthi umdwebo we-lip usuphawu olubalulekile lwamadoda nabesifazane emhlabeni jikelele.
Sibona abantu abaningi abanezithombe zomlomo kunamashumi eminyaka adlule ngenxa yobuciko obuza ne-lip tattoo.
Ukuthanda nokuthandwa kwakho kube yizinto ezimbili ezithinta uhlobo lwe-tattoo lomlomo ongawukhetha. Izindleko yinto abantu abaqala ukuyicabangela ngaphambi kokuba bahambe nge-inking. Uma ungeke ukwazi ukukhokhela le tattoo yomlomo, kungase kungabi ikhetho elihle lokuthola. Ungabhala noma yini oyizwayo ezindebeni
I-Lip tattoo isibe yinye yezesekeli zemfashini esizibona emzimbeni wabesilisa nabesifazane. Ukuphela kwezinsuku lapho ukudweba i-lip kubhekwe njengento emnandi. Emhlabeni wonke, abantu baye bavuma ubuhle nomlayezo wokuthi izitho zomlomo zingasetshenziswa ukudlula. umthombo wesithombe
I-Lip Tattoos Yokuphila
Thatha isibonelo, uzizwa kanjani unomlomo othakazelisayo we-tattoo kanje? Leli tattoo elilodwa lomlomo eliye laba umkhuba phezu kweminyaka. Abaningi bethu baye bajabulela imisebenzi yobuciko esimangalisayo esiyifake kuzo izingxenye ezihlukene zomzimba wethu ukuze kusikhumbuze okwamanje, esidlule ngisho nangesikhathi esizayo. umthombo wesithombe
Ubuciko be-tattoo bube yinye yefomu yobuciko endala eye yacatshangwa ngabantu. Ubuciko bube yindlela yokuveza noma ukuhlubuka ngokuya kulokho okusetshenziselwa khona. Kukhona nabantu abasebenzisa i-tattoo njengendlela yokuhlobisa. umthombo wesithombe
I-tattoo ye-Danger Lip
I-Tattoo ekhethekile ye-Lip
Ama-Top Ladies Lip Tattoos
Ukuqinisa Lip Tattoo
Lezi zinsuku izithombe zomlomo ziye zaba yinto evamile ukuthi siyibona cishe kubantu abane. Imidwebo ye-Lip yimisebenzi yobuciko esetshenziselwe ukumela izinto eziningi futhi ukhulume ngabantu. umthombo wesithombe
I-Lip Tattoo enamandla
Abantu abaningi baye bazisola ngokuthi babe nezithombe zomlomo ngenxa yokuthi abazange badlale kuyo. umthombo wesithombe
Ukufanisa Tattoo Lip
Ubuhle be-tattoo yomlomo bungacatshangwa kuphela uma i-ink ekhanda kakhulu kuwe. Ingxenye yomzimba lapho udinga khona i-lip tattoo ibaluleke kakhulu. umthombo wesithombe
Lokhu kungenxa yokuthi uzoya ukufihla noma ukuwuveza ukuze umhlaba ubone. umthombo wesithombe
flower tattoosi-henna tattootattoos eagleimibono ye-tattooukudubula izithombeamathumbu esifubai-octopus tattooidayimani tattooama-Tattoos amantombazanei-cherry ehlobisa i-tattooTattoos yama-Ankleabangani bomngane abangcono kakhuluI-Heart TattoosI-Feather Tattooumdwebo we-watercolorumdwebo womcibisholoama-tattoo kubantuimisindo yezintamboTattoos zeJomethrikhiama-tattoos engaloi-compass tattooama-tattoo amahangetattoos cuteizibonakaliso zezinkanyezi zezinkanyezibird tattoosngesandla izidakamizwatattoo engapheliizithombe zezingonyamaimibhangqwana emibhangqwanatattoo isoama-tattoorose tattoosizithombe zezinhlangaukubuyisa izithombetattoos udadeumculo womdwebolotus flower tattooangel tattoosizinyawo zamathambotattoos zomqheleimidwebo yamasleekoi fish tattooi-scorpion tattoouthando izithombeamathrekhi we-butterflyumdwebo wezindlovuama-sun tattoosama-cat tattoosizithombe zezinyangadesign mehndi